सिटमा दोस्रो देखिए पनि समग्रमा एमालेको जनमत बढेको छ : नेम्बाङ | शुभयुग
अघिल्लो निर्वाचनमा पहिलो भएको नेकपा एमाले यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनका कारण मात्रै नेपाली कांग्रेस पहिलो हुन पुगेको तर्क गर्र्ने एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ तमाम घेराबन्दीका कारण पनि एमाले दोस्रो स्थानमा रहन सक्नुलाई पार्टीको विजयका रूपमा लिन्छन् । , ‘गठबन्धन गरेर जानु नै उहाँहरूको पहिलो पराजय थियो, त्यसमाथि पाँच दलीय गठबन्धनले नपुगेर अन्य दलसमेत जोड्दा पनि एमालेलाई दोस्रो स्थानभन्दा तल झार्न नसक्नु उहाँहरू थप पराजित हुनु हो । एक्लाएक्लै निर्वाचन लडेर विजय हुने हिम्मत् त एमालेसँग रहेनछ भनेर यो निर्वाचनले पुष्टि गरेको छ ।’ उनै नेम्बाङसँग निर्वाचन, निर्वाचनको परिणामलगायत विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
जनतालाई धक्क्याएर मत माग्ने काम शीर्ष नेताले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री पत्नीले समेत गर्नुभयो । जिताएको अवस्थामा स्थानीय पालिकामा पैसा पठाउने, नजिताए नपठाउनेसम्म भन्नुभयो ।जिताउने परिवारलाई मलेसिया हो कि साउदी अरब पठाउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभयो । प्रधानमन्त्री पत्नीले त्यो भूमिकामा बसेर यस्तो बोल्न मिल्छ ? तर, बोलिदिनुभयो । त्यति मात्र होइन, निर्वाचनपछि पनि राज्य शक्ति दुरुपयोग गरेर एमालेलाई एक्ल्याउने काम गरियो । पार्टी महासचिवले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् भनिसक्नुभएको छ । तसर्थ, म भन्छु– एमालेको केही सिटमा तलमाथि भयो होला तर जनमत घटेको छैन । बरु, एमालेले एक्लैले अरू दललाई यो निर्वाचनमार्फत् ‘डिफेन्स’ मा राखिदिएको छ ।
प्रतिगमन के हो ? हाम्रो पार्टी अध्यक्षले नयाँ जनमतका लागि भन्दै निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरेर जानुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदियो । एकपटक त परमादेशबाट नै । तर, पनि हाम्रो पार्टीले कानुनी राज्य बलियो बनाउनुपर्छ भनेर त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्यो । चुनावमा गयो । के ओलीजीले मात्रै संसद बिघटन गरेको हो र ? त्यसअघि गिरिजाबाबुले पनि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । मनमोहनजीले पनि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । सूर्यबहादुर थापाले पनि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । यो मुलुकमा ६/६ पटक संसद् विघटन भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको नजिर पनि छ । तर, ओलीजीले गरेको संसद् विघटन चाहिँ प्रतिगमन ? अनि अरूले गरेको चाहिँ अग्रगमन ? यो त राजनीतिक खपतका लागि बोलिएको विषय मात्रै हो ।
योभन्दा केही अरू देख्नुहुन्छ । त्यसपछि यो पनि बिर्सन हुन्न कि ओलीजीले गरेको संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्नेहरू आफैं पुनः विघटन गर्न नलागेका होइनन् र ? स्थानीय तह निर्वाचन सारेर सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि नगरेका होइनन् र ? के संसद् विघटन नगरी सङ्घीय संसद्को ‘अर्ली इलेक्सन’ हुनसक्थ्यो र ? त्यसैले संसद् विघटनको प्रस्ताव त सर्वोच्चको परमादेशबाट पछि पनि सत्तारूढ दलबाट आएको हो ।
हामीले बरु त्यसको ठाडो प्रतिवाद गर्यौँ, कि संसद् विघटन गरे ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने सत्तारूढ दलको चाहनालाई अवरोध गरेर मुलुकलाई स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ होमायौँ । त्यसैले उनीहरूले गरे प्रतिगमन नहुने र अग्रमन हुुने अनि हामीले गरेर प्रतिगमन हुने ? यो त राजनीतिक खपतका लागि बोलिएको विषय मात्रै हो । यसमा कुनै तुक छैन ।
हाम्रो पार्टी तहमा यो कुरा भएको देखिएको छैन । केही साथीले गरिरहेका हुन सक्लान्, नहोला भन्न पनि सकिन्न ।सम्भवः छ र ? असम्भव छ र ? आकाश–पाताल नै फरक भएको र एक अर्कासँग विचार नै नमिलेका दलहरूले गठबन्धन गरेर चुनावमा गए । हामी त झन् समान विचार भएका दलहरूसँग मिलेर जाने कुरा नहुन सक्छ र ? हेर्दै जाउँ ।